मीरा ! तिम्रो याद झन् बढेको छ – Sourya Online
मीरा ! तिम्रो याद झन् बढेको छ
सौर्य अनलाइन २०६९ असार ९ गते १:५८ मा प्रकाशित
श्रीमती भनेको घरको प्राण हुन् । प्राण नै झिकेपछि त्यहाँ कंकाल मात्रै बाँकी रहन्छ । करिब एक वर्षअघि मीराको देहान्त भएपछि मेरो घर त्यस्तै कंकालजस्तो भयो । कोठाहरू लथालिंग हुन्थे, विद्यार्थी बस्नेजस्तो । सामान लठिभद्र, लुगा यत्रतत्र छरिएका, भाँडाकुँडा फोहोर । मलाई वास्तवमा घरमा पस्नै मन लाग्दैनथ्यो । जम्मा दुईजना बस्थ्यौँ हामी, कान्छो छोरा मोहित र म । जेठो छोरा त्रिलोक परिवारसहित अमेरिकामै बस्छ । कान्छोले पनि आºनो व्यवसाय सुरु गरेकाले घरमा आउने/जाने टुंगो हँुदैन उसको । म एक्लो ज्यान, त्यो घरमा केवल बिरह मात्रै पाउँथेँ । घर पस्यो कि तनाब हुन्थ्यो । आँसु निरन्तर झरिरहन्थ्यो । भित्तामा टाँसिएका फोटोहरूले मन रुवाउँथे ।
मेरो जीवनको उत्तराद्र्ध बाँकी छ । अझै १५ वर्ष आºनो पेसामा सक्रिय रहन सक्छु होला । सिर्जनशीलता कम हुन सक्छ तर रमिलाको आगमनपछि पहिलेजस्तै सक्रिय भएर काममा फर्कने विचार लिएको छु । मेरो बिहेलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिइदिनुभएको छ, मेरो सेन्टिमेन्ट बुझिदिनुभएको छ । फेसबुकमा सयौँले शुभकामना दिनुभएको छ । मिडियाले पनि राम्रो रूपमा लेखेका छन् । यसबाट मलाई आफूले जे गरेँ ठिकै गरेको रहेछु भन्ने आत्मबल मिलेको छ । अरूले नराम्रो सोचेका भए म कमजोर हुन सक्थेँ । म सबैप्रति आभारी छु ।
प्रस्तुति : चिरञ्जीवी पौडेल